Sir Culus Colaada Maxamuud Garaad Oo La ogaatay Qorshaha Loo Istaadhay Hada, – KHAATUMO NEWS
Sir Culus Colaada Maxamuud Garaad Oo La ogaatay Qorshaha Loo Istaadhay Hada,
Waxaa maalmahan aad loo arkaayay oo warbaahinta aad uga soo muuqanaayay qorshe uu Wasiir Faratoon ku doonaayo gudoomiyaha Barlamaanka Maamulka Somaliland.
Hadaba maamulka Somalilnd, oo arrinkaasi aad uga soo horjeeda ayaa bilaabay qorshe uu ku fashilinaayo ololaha kursiga Gudoomiyaa Barlamaanka somalialnd ee Faratoon ku doonaayo,.
Talabada kaliye Muuse Biixi iyo Beesha Isaaq Ku fashilin karaan Damaca Faratoon si sahlan ayaa noqotay in colaad laga dhex huriyo Beelweynta Maxamud garaad, colaadaasi oo sababta in la isku talaabi waayo si ay meesha uga baxdo in ololaha doorasho ee Faratoon sii socdo ama hir galo.
Xogta ay heshay Khaatumonews.com ayaa ah in Muuse Biixii kursiga Gudoomiyaha Barlamaanka Somaliland la doonaayo Beesha Garxajis islamarkaana uu layaabay ololaha Faratoon.
Sido kale waxaa uu Muuse Biixi, Amiinay in ay halis tahay in Kursigii mar loo xoogay Dhulbahante in mar labaad hadii loo xoogo ay noqon doonto dhabo furan.
Hada waxaa si hordhac ah u hirgalay qorshihii Maamulka Somaliland ku fashilinaayay damaca Faratoon ka galay Kursiga Gudoomiyaha Barlamaanka waxaana durba maryo dhiig leh kala furtay Beesha Maxamuud Garaad iyadoo Deegaankii iyo dadkii is dhexmaraayay ee nabada Ahaana hada cid u kala soocn karta aysan jirin.
Si kastaba ha Ahaate Maamulka Muse Bixi aya si coladan u istaadhanto wuxuu markiiba u adeegsady una sahlay Maleeshiyaadka ka mushahaar qaata ee Beelaha Naleeye Axmed iyo jaamac Siyaad
Previous Post: Farmaajo Shirkii Beesha Mareexan ka yidhi’Daarood ayaa i jabiyay Madow iyo Cadan’
Next Post: War Deg Deg Ah:Dawlada Soomaaliya laga Qabsaday Caawa Goobo muhiim u ah Muqdisho
Khiyaali news iyo xertiisaba.
Goormaad ka kori doontaa waa la isku kaaya diraa anaga markaasaan birta iska asalnaa???
Dhulbahante ragood waa mideysanyihiin dumarkoodna waa mideysan yahiin, Wajeerteen waa walaalahood, Warsangali waa walalahood.
Waxaa inagu soo duuley cadow qabiil isaaq iyo samaroon iyo ciise doonaya dhulkeena iney ka iibsadaan shisheeye deeganadeen xoog kujoogaan iyo qori caaradiis, haldoorkii meeye, nimankaa isku dayaya iney hagaajaan deeganadooda iyo shacbkooda dhulhante ee la fadhiya isaaqa hargeyso laga soo daabuley iyo burco guuleysan weydey waligiina wax qaadi meysaan ee walaalahiin la shaqeysta harti darood aheada.
maxamuud garaad turturuu weli tiicaaye
,tafantoofe nimankii ii nugaal teysa kulahaa, ararsame ma toocsado fardaha takhantakhoodeiye, tawstuna cali geri bey hadhi…….
DHULMAHANTOW WAA LA ISKU KAAYO DIREY WAA NUSQAAN WEYN
Faratoon- waxaa wata oo Gudoomiyaha Golaha Baarlamaanka ka dhigaya Xisbiga Kulmiye iyo Muuse Biixi.
Qofkii aan arrinta sidaa ula socon- waa qof isagoo soo jeeda Riyoonaya.
Kusocoto khaatumo news
Gobanimada dhulbahante meel yaan lagaga dhicin.
Dhulbahante waa qaran sharafle shaqsiyad Canada qatayaal ah reerka waa laga heli karaa.
Lakin nin horgale u ah SNM haso qaadina.
Haduu yahay faratoon ama caadaqataysha kale ee idoorka u marti ah , hakala jeclaanina
Sharafta dhulbahante Somali nimo ayay ku jirtaa.
Muuse haduu cid isku dirayo ninka maqlaya aya ka damirliita.
Maxaad faratoon horgalada uga soo dhex saraysaan
Haday tahay sidaas waa doqonimo, dadnimo xumo iyo diin la’aan, haday iyagu isdilayaana waa dagaaladaa meel kasta oo Soomaaliya ah ka socda waana wax xun, ilaahay umadda Soomaaliyeed ee islaamka ah qalbigooda ha isu soo jeediyo meelay joogaanba.
Ahmed Lawrie adiga caqligaagu ma waxuu noqday idoor baa isku maayo diray wa kaas caqligii dhulmahante geelwas cawaan jaahil